Cyprus Inoita Vhiki nevhiki COVID-19 Kuyedza Zvinotenderwa Kune Vese Vasina Kuvhenekerwa Vashanyi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Cyprus Inoita Vhiki nevhiki COVID-19 Kuyedza Zvinotenderwa Kune Vese Vasina Kuvhenekerwa Vashanyi
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Cyprus Kupwanya Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Cyprus inoita vhiki nevhiki COVID-19 bvunzo inosungirwa kune vese vasina kuvhenekerwa vashanyi
Vashanyi vane COVID-19 gwaro rekubaiwa kana chitupa chinosimbisa kupora kwakabudirira kubva kuhutachiona hwekare hweCOVID-19 vanoregererwa pamuedzo wePCR.
Vakuru veCyprus vanozivisa mitsva COVID-19 mirau yevashanyi.
Yevhiki nevhiki COVID-19 bvunzo izvo zvino zvinodikanwa kune vese vasina kudzivirirwa vashanyi
SafePass ikozvino inodikanwa kunzvimbo dzeruzhinji.
Vakuru vehurumende yeCyprus vazivisa seti nyowani ye COVID-19 zvirambidzo zvevashanyi nhasi.
Kutanga kubva Nyamavhuvhu 1, vese vasina kuvharirwa vachengeti vezororo mu Saipurasi uchafanirwa kutora bvunzo dzePCR vhiki rega rega. Muedzo wekutanga uchazodiwa kutanga kubva pazuva rechinomwe mushure mekuuya kwevashanyi vasina jekiseni pachiwi.
SafePass inosimbisa kusavapo kwe COVID-19 ichada kuratidzwa kana uchishanyira zvitoro nevashanyi vanopfuura gumi, pamwe nemasangano ekurapa chero pachitsuwa ichi.
Sekureva kwezviremera, kubva ikozvino, iyo mirau mitsva ichazoshanda kusvika Nyamavhuvhu 31.